Maxaa loo calaamadeeyay – Tokenization Somalia
Maxaa loo calaamadeeyay
Qiyaasta dhowaanahan waxay sheegaysaa in qiimaha hadda ee dhammaan hantida dunida dhabta ah ee adduunka ay gaarayaan $ 256 tiriliyan.
In kasta oo tiradan hoos u dhacaysa ay tahay mid xasilloon, haddana dhammaan hantidani si joogto ah ayay gacmaha isu beddelaan. in laga ganacsado hantidan waa mid gabowday.
Lahaanshaha inta badan hantida dunida dhabta ah wali waxay ka dhigan tahay warqad jarjaran.
Taasi waa sababta macaamillada badankood ay qaadan karaan toddobaadyo ama xitaa bilo.
Ka ganacsiga hantida sidoo kale waxaa hareeyay xafiisyo badan, ajuuro aan la tirin karin, iyo xaddidaadyo kala duwan oo juqraafi ah. Intaas waxaa sii dheer, hantida badankood way adag tahay in la qaybiyo taas oo ka dhigaysa suuqyadooda kuwo aad u liita. Hantida ma guurtada ah, keydka dahabka iyo farshaxanka fiican ayaa tusaale fiican ah.
Nasiib wanaagse, horumarkii ugu dambeeyay ee calaamadeynta, sida hantida dhabta ah loo haysto loona ganacsado waxay qarka u saaran tahay kacaan dhab ah. shabakad xannibaadda. Markii la tuuro, astaamaha ayaa asal ahaan noqda keyd dijitaal ah oo wata caddeyn lahaansho la aqbali karin. Dib u habeyn weyn oo lagu sameeyo nidaam kasta oo calaamadeyn warqadeed ah ayaa ah sida aan u maareyn doonno hantida mustaqbalka.
Maxay tahay sababta astaamaha aduunku dhabta u yihiin?
Haddaynu calaamadeynno hantida dhabta ah ama waxyaabaha aan la taaban karin sida hantida aqooneed, waxaan abuureynaa degsiimo xisaabeed aan la qiyaasi karin oo fududeynaya macaamil ammaan iyo deg deg ah.
De plus, waxaan ku ganacsan karnaa dhab hantida leh astaamo dijitaal ah oo ku saabsan xannibaadda iyada oo aan loo baahnayn dallaaliin dhinac saddexaad ah. Taabadalkeed, waaritaan la'aanta xannibaadda ayaa xayiraysa macaamil isku day kasta oo isku day khiyaano ah.
Maxay tahay sababta astaamaha astaamaha ah ee dhabta ah? hantida leh astaamo dijitaal ah oo ku saabsan xannibaadda iyada oo aan loo baahnayn dallaaliin dhinac saddexaad ah. Taabadalkeed, waaritaan la'aanta xannibaadda ayaa xayiraysa macaamil isku day kasta oo isku day khiyaano ah.
Previous PostPrevious Faa’iidooyinka calaamadaha
Next PostNext Waa maxay calaamadeynta
Waa maxay calaamadeynta sidee se u soo nooleyn kartaa dhaqaalaha
Waa maxay calaamadeynta